Saturapu - Wikipedia
Peji rino rinoda kuwerengwa ne kugadziriswa uye kuwedzerwa
Masaturapu (kana masatrapu) vaive magavhuna ematunhu ekare eMedhia nemaUmwene eAkeminidhi uye mune akati wandei evatevedzeri vavo, senge muHumambo hweSasaniya neUmwene hweHerenisti. Saturapu akashanda somutevedzeri wamambo, kunyange zvazvo aizvitonga zvikuru. Shoko rakauya kuzopa pfungwa yehudzvinyiriri kana kubwinya kwakashata.
Satrapi inharaunda inotongwa nemubati.
Izwi rokuti satrap rinotorwa kuburikidza ne Masaturapu echiRatini kubva ku Chigiriki satrápēs (σατράπης), iro pacharo rakakweretwa kubva kuChiirani cheKare *xšaθra-pā/ă-. MuChipehziya cheKare, waive mutauro wekuzvarwa wevaAkemenidhi, wakanyorwa se xšaçapāvan (𐎧𐏁𐏂𐎱𐎠𐎺𐎠, chaizvoizvo "mudziviriri wepurovhinzi"). Chimiro cheMedhia chinovakwa patsva se *xšaθrapāwan-. Inopindirana neChisaniskiriti kṣatrapal (क्षेत्रपाल). Chimiro che Chihebheru chemubhaibheri ndicho ǎḥašdarpån אֲחַשְׁדַּרְפָּן, sezviri muna Esiteri 3:12.
MuParatiya (mutauro weUmwene hweArsacid) uye Pakati pePezhiya (mutauro weUmwene hweSasaniya), yakanyorwa mumhando šahrab uye šasab, zvichiteerana.
MuChipezhiya chemazuvano chakabva kuna xšaθrapāvan ndiye shahrbān (شهربان‎), asi zvikamu zvakachinja semantic saka shoko parizvino rinoreva "muchengeti wedhorobha" (shahr [شهر] zvichireva kuti "dhorobha" + bān [بان‎] zvichireva kuti "muchengeti")
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Saturapu&oldid=89989"
Last edited on 30 Gumiguru 2021, at 12:01
This page was last edited on 30 Gumiguru 2021, at 12:01.